Friday October 21, 2016 - 07:58:32 in Wararka by Xafiiska Muqdisho
Qaramada Midoobay, Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Midowga Yurub (EU), Urur-Goboleedka IGAD, Itoobiya, Talyaaniga, Sweden, iyo Boqortooyada Midowday ee Britain ama Ingiriiska ayaa soo dhoweeyay sida guusha leh ee lagusoo gunaanaday geedi-soco
Qaramada Midoobay, Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Midowga Yurub (EU), Urur-Goboleedka IGAD, Itoobiya, Talyaaniga, Sweden, iyo Boqortooyada Midowday ee Britain ama Ingiriiska ayaa soo dhoweeyay sida guusha leh ee lagusoo gunaanaday geedi-socodkii maamul u samaynta Maamulka HirShabelle ee dhowaan la unkay, waxayna u hambalyeeyeen Madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble iyo Madaxweyne Kuxigeen Cali Cabdullaahi Xuseen oo iyagu qaaday mas'uuliyaddaas culus.
Saaxiibada caalamku waxay maamulka HirShabelle ku dhiirri-geliyeen inay la hadlaan kooxihii aan ka-qaybqaadanin geedi-socodka maamul samaynta, lana xaqiijiyo ilaalinta masaalixda dhamaan beelaha [deegaanka].
Tani waa in lagu xisaabtamaa marka laga qaybqaadanayo geedi-socodka doorashada oo si loo wada dhanyahay loo helo metelaadda labada aqal.
Saaxiibada caalamku waxay ku boorriyeen madaxda cusub ee HirShabelle inay hadda diiradda saaraan geedi-socodka doorasho ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya.
Maamulka cusub wuxuu haystaa fursad uu ku muujiyo hogaamin isagoo u hogaansamaya xeerarka iyo habraacyada ay isla meel dhigeen madaxda Madasha Hogaanka Qaran.
Saaxiibada caalamu waxay maamulka cusub ugu baaqeen inuu dadaal kasta ku bixiyo sidi geedi-socodka ay ugasoo bixi lahayd magacaabis mas’uuliyiin sumcad leh oo loo magacaabo xafiisyada dowladda, kuwaas oo aan wiiqi doonin sharciyadda iyo kalsooni ku qabidda Dowladda iyo Baarlamaanka cusub.
"Soo dhawoow HirShabelle” ayuu yiri Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud ee Qaramada Midoobay u Qaabilsan Soomaaliya Michael Keating.
"Beesha caalamku waxay diyaar u tahay inay taageerto maamulka cusub oo isagu ku hawlan ajenda u samaynta muwaadiniintiisa iyo horumarinta hay’adaha dowladeed si uu wax uga qabto baahida muwaadiniintiisa”.